Talada Koorsada Jarmalka ee Berlin
Waxaan u diyaarinay kuwa doonaya inay bartaan iskuulada ku baxa luuqada Jarmalka ee ku yaal magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. Koorsada Jarmalka ee ugu Fiican Berlin Waxaan kugula talineynaa inaad si taxaddar leh u eegto maqaalkeenna cinwaankiisu yahay. Maqaalkan, waxaan isku dayi doonnaa inaan ku siino macluumaad ku saabsan saddexda iskuul dhaqaale ee ugu wanaagsan magaalada Berlin, oo bixiya waxbarashada guud ahaan Jarmalka, waxay ku guuleysataa dhibcaha ugu sareysa sida ku xusan faallooyinka ardayda iyo halka xaaladaha nololeed ay ka sahlan yihiin.
Koorsada Module Berlin - F + U Akadeemiyada Luqadaha
Koorsada Jarmalka, oo la furay 2013, ayaa ka mid ah kuwa la doorbiday, in kasta oo ay ka cusub tahay iskuulo badan oo luuqadeed ah, dhaqaalaheeda iyo waxbarashadiisa awgeed. Dugsiga luqadda, cabirka fasalka ugu badan waa 15 arday, da'da kooxda ardaydu waa 16 sano, ka weyn da'da 20 jir. Wadarta muddada koorsada, oo bixisa tababar Isniinta iyo Jimcaha, way kala duwan tahay inta u dhaxeysa 1-52 toddobaad. Waxaa jira 45 cashar oo ah 10 daqiiqo usbuucii.
BWS Germanlingua Berlin - Ku dhawaaqida Jarmalka
Waa mid ka mid ah koorsooyinka luqadeed ee ugu dhaqaalaha badan magaalada Berlin. Waxaa la furay 1984 waxayna sii wadaa inay u adeegto 9 fasal. Dugsiga luqadda ee bixiya waxbarashada dhammaan heerarka, celceliska cabbirka fasalku waa 1 iyo ugu badnaan 2. Dugsiga luqadda, oo celcelis ahaan da'diisu u dhexeyso 16-25, wuxuu koox ka dhigayaa bilowga Isboortiga Isniin kasta. Muddada koorsada waxay socotaa illaa 48 toddobaad wadar ahaan waxaana la arkaa inay jiraan 45 cashar oo ah 3 daqiiqo usbuucii. Dugsiga luqadda, oo casharada dhigta maalmaha Isniinta iyo Jimcaha ee usbuuca, waxaa laga yaabaa inuu leeyahay xoogaa fasaxyo horay loo sii cayimay oo waxaa kuu fiicnaan lahayd inaadan dooran duruus maalmahaan. Markaad ka fiirsanaysid inaad doorato iskuul luuqadeed, waa waxtar inaad barato ciidaha kahor.
Iskuulka Luqadda Jarmalka ee GLS Berlin - Koorso Caadi ah
Iskuulka luuqada ee magaalada Berlin waxaa la furay sanadkii 1983 wuxuuna hada ku shaqeeyaa 50 fasal. Waxay ka shaqeysaa dhammaan qeybaha waxbarashada luqadaha qalaad sida ku hadalka, dhageysiga, qorista, akhriska, ku dhawaaqida, naxwaha iyo eray bixinta. Cabbirka fasalka ee fasallada waa 8, ugu badnaan 12. Dugsiga luqadda, oo ay dhigtaan ardayda da'doodu u dhaxayso 18-27, wuxuu bixiyaa casharro kooxeed subaxnimo. Muddada tababarku way kala duwan tahay inta u dhexeysa 1-52 toddobaadyo koox cusub ayaa loo furaa Isniinta bilowga ah. Waxaa jira 45 cashar oo ah 20 daqiiqo usbuucii.